mardi, 31 mars 2020 19:43
Sary: Talentino Hilaire
Analalava-Sofia: Nitsoaka coronavirus avy any Nosy-Be nandeha sambolay nitady toerana mangingina
Nisy mpizahatany tonga tao amin’ny fokontany Nosilava Kaominina Analalava ny harivan’ny alatsinainy 30 marsa 2020. Sambolay miisa 3 no nitondra azy ireo, izay nahitana olona 14. Nidina avy hatrany nijery ny zava-misy ny lehiben'ny Distrika, ny lehiben'ny boriboritany Analalava, ny Médecin Inspecteur sy mpiasan'ny fahasalamana, ny mpitandro filaminana niaraka tamin’ny Ben'ny Tanàna, ka tamin’izany no nahalalana fa nitsoaka ny mety ho fisian'ny valanaretina Coronavirus any Nosy-Be izy ireo, ka nijery toerana mba mangingina tsy misy olona. Nisy ny fizahana maripana natao tamin'izy ireo, taorian’izay dia nasaina niverina any Nosy-Be izy ireo. Maniry ny hahazo fitaovana ahafahana manara-maso ny sisintany aty Analalava ireo tompon'andraikitra, mba hisorohana amin’ny fihanaky ny valanaretina coronavirus, ary ny fampitaovana fitiliana ahafahana mamantatra ireo mitondra tsimokaretina. (Jereo Sary Tohiny)
mardi, 31 mars 2020 12:21
Coronavirus: Mitebiteby Befotaka Nord
Herinandro aty aoriana, sasa-miandry ilay valin'ilay fitiliana an'ilay vazaha Delmas Joseph Anthony ny mponina aty Befotaka Nord, indrindra ireo mpitandro ny filaminana sy ireo fianakaviany, izay nolazaina fa tsy maintsy atoka-monina raha voamarina fa mitondra ilay otrikaretina coronavirus ity tera-tany frantsay ity. Hatreto dia tsy misy tatitra momba ny valin'izany fitiliana izany tonga aty an-toerana. Nisahotaka tokoa manko ny mponina taty amin'ny Kaominina ambanivohitra Befotaka-Nord ny sabotsy 21 mars lasa teo nahita vazaha naka sary sy nivezivezy, ka izay tanàna nandehanany dia nandroaka azy avokoa. Niditra antsehatra ny mpitandro filaminana iarovana ny ainy sy ny tsy hitaran'ny korontana taty an-toerana.
mardi, 31 mars 2020 09:10
Coronavirus: Hatao fitiliana maika avokoa ireo rehetra nahavita fihibohana 14 andro taorian’ny fahatongavany avy any ivelany
Tonga eo amin’ny faran’ny fe-potoana nihibohana an-trano ny andiany voalohany tamin’ireo olona tonga teto Madagasikara tamin’ny sidina avy any ivelany nanomboka ny 11 marsa 2020. Hatao fitiliana maika (test rapide) avokoa izy ireo hamantarana ny toe-pahasalamany mialoha ny hiverenany eo anivon’ny fianakaviany avy, araka ny nambaran’ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Homena fanamarinana na « Certificat de fin de mise en quarantaine » ireo izay azo antoka fa tsy misy soritraretina tsy hisian’ny ahiahy amin’ny fiverenan’izy ireo eny anivon’ny fianakaviany. Hatao ankalamanjana ny fitiliana ary efa misy ny fandaharam-potoana hanatanterahana izany nampahafantarin’ny filohan’ny Repoblika ny alatsinainy 30 marsa teo.
mardi, 31 mars 2020 08:11
« Vatsy Tsinjo »: Izay mahazo SMS avy amin’ny CUA no tonga ary mahazo
Mitohy ny fizarana « Vatsy Tsinjo » ao anatin’ny Drafitra sosialy ho fanohanana ireo olona tsy afa-miasa ao amin’ny sokajin’asa marefo vokatry ny fampiharana ny hamehana ara-pahasalamana noho ny valanaretina coronavirus. Anisan’izay ireo mpamily taxi, taxibe ary resevera. Nisy 1 600 indray no nahazo fanampiana ny alatsinainy 30 marsa, ao anatin’ny Drafitra sosialy. Teo anoloan’ny Lapan’ny tanàna no nanaovana ny fizarana. Nanamarika ny Fiadidiana ny tanànan’Antananarivo fa izay nahavoaray SMS avy amin’ny CUA ihany no tokony ho tonga eny an-toerana. Tsy misy SMS manan-kery ahazoana ny « Vatsy Tsinjo » afa-tsy ny avy amin’ny CUA ihany. (Jereo Sary Tohiny)
lundi, 30 mars 2020 16:17
67ha: Tompona "Bar" iray no nosamborin'ny Polisy noho ny tsy fanarahan-dalana
Nanokatra ny toeram-pivarotany, sady manentana ny mpisotro toaka tao aminy, hanohitra ny asan'ny mpitandro filaminana, nosamborin'ny Polisy ny tompon’ilay trano fisotroan-toaka iray tetsy 67ha ary nakatona ilay toeram-pivarotana. Noravan'ny Polisy ihany koa ireo tanora milalao eraky ny araben ' Ankazomanga izay manao baolina sy milalao roller ka nogiazana avokoa ny kilalaon'izy ireo tsy hahafahany manao izany intsony, hisorohana ny fihanaky ny valanaretina coronavirus.
lundi, 30 mars 2020 14:01
Antsohihy: Lehilahy iray matin'ny fitsaram-bahoaka
Mpangalatra nifanenjehan’ny Fokonolona izy ity, ary niharan’ny fitsaram-bahoaka avy hatrany rehefa voasambotra. Namoy ny ainy noho ny fahaverezandra be loatra ilay lehilahy. Tonga ny mpitandro filaminana rehefa nahazo fampilazana, saingy efa tsy nisy azo natao intsony. Tao amin’ny Fokontany Ankiririky Avaratra II, Antsohihy no nisehoan’ity tranga ity androany alatsinaina 30 martsa 2020 vao maraimbe tokony ho tamin'ny 03 ora.
Taorian’ny fifampikasohany tamina lehilahy iray, teratany Maorisiana, 72 taona, avy any amin’ny Repoblika Demokratikan’i Congo (RDC) ny 14 marsa ka tonga ao Addi Abeba, misy ny foiben’ny Vaomiera Afrikana nefa mitondra tsimokaretina coronavirus dia natokam-ponenana avy hatrany i Moussa Faki, filohan’ny Vaomiera Afrikana. Nisy olona enina efa nifampikasoka tamin’ity teratany maorisiana ity hatramin’ny nahatongavany ary efa samy arahi-maso ara-pahasalamana avokoa amin’izao. Firenena miisa 46 amin’ny 54 aty Afrika no efa ahitana ity valanaretina coronavirus, ka 3 924 no voamarina mitondra ny tsimokaretina, ary efa namoizana ain’olona 117 araka ny tatitra nataon’ny « Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l’Union africaine » ny omaly sabotsy 28 marsa 2020. (Jereo Sary Tohiny)
(Sary: Hôtel Royal Palace Antsirabe)
Iray amin’ireo hotely niantranoan’ilay vazaha mpizahatany voan’ny coronavirus, araka ny nambaran’ny filohan’ny Repoblika Andry Rajoelina, ny alin’ny 28 marsa 2020 ny Hôtel Royal Palace Antsirabe. Ny 14 marsa 2020 no niantrano tao ireo andiana mpizahatany niaraka tamin’io vazaha io, hoy ny fanambarana nataon’ny hotely taorian’ny fanambaran’ny filoha io 28 marsa 2020 io. Tsy ahitana soritr’aretina ny mpiasa, hatreto, hoy ny mpitantana ny hotely, na izany aza naka fanapahan-kevitra ka hikatona vonjimaika tsy handray mpanjifa aloha ny hotely. Hatao ny famendrahana fanafody hiadiana amin’ny otrikaretina.
dimanche, 29 mars 2020 17:18
Sambava: Miantso vonjy ny ray aman-drenin’ireo mpianatra mihitsoka an-dalana ao Maromokotra
Tao anatin'ny ranomaso no nitalahoanan'ireto solontena ny Ray aman-drenin’ny mpianatry ny SESAME avy any Antananarivo izay tavela ao anaty alan’i Maromokotra, 80 Km tsy hidirana an’i Vohémar noho haratsian’ny lalana. Mihitsoka tsy afaka nanohy ny dia ny fiara Sprinter nitondra azy ireo avy any Antananarivo, izay niainga tamin’ny alahady lasa teo, hanatitra ireto mpianatra ireto. Ny zava-misy amin’izao anefa, hoy ireo ray aman-dreny ireo dia mihidy avokoa ny sisintany miditra ny Faritra SAVA. Milaza ho nahita fiara 4X4 iray vonona handeha hanavotra ireo mpianatra ireo, ny ray aman-drenin’izy ireo saingy midangana ny sarandalana : 100 000 Ariary isan’olona vao handeha raha toa ka misokatra ny lalana.
"Tolom-panafahana 1947: Ilo tsy very enti-mampandroso ny firenena", io no lohahevitra efa voafaritra ho an’ny tsingerintaona faha-73 ny Tolom-panafahana 1947 izay tsaroana isan-taona isaky ny 29 marsa. Ho fanajana ireo fepetra noho ny Fahamehana ara-pahasalama mihatra eto amin’ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara, dia « lanonana tsy atrehim-bahoaka » no hisy eny amin’ny Mausolée Avaratra Ambohitsaina-Antananarivo, ny 29 marsa 2020 ho fahatsiarovana ny Tolom-panafahana 1947. « Tsy hisy famoriam-bahoaka na eto an-drenivohitra na any amin’ny Faritra, tsy hisy fananganan-tsaina, tsy hisy fitsofana mozika », hoy i Lalatiana Andriantongarivo Rakotondrazafy, minisitry ny serasera sy ny kolontsaina sady mpitondratenin’ny governemanta.